Haltérophilie – Lalao Olympika 2016 (J.O) : hiatrika famaranana Ravololoniaina Vania | NewsMada
Haltérophilie – Lalao Olympika 2016 (J.O) : hiatrika famaranana Ravololoniaina Vania
Hiaka-tsehatra anio eo amin’ny Lalao Olympika, taranja fibatana fonjamby, Ravololoniaina Vania. Avy hatrany dia famaranana sy fiadiana medaly izany. Atleta 15 no indray hiady ny lohany eo amin’ny sokajy -63 kg vehivavy misy an’i Vania.
Ravololoniaina Elisa Vania. Atleta malagasy eo amin’ny fibatana fonjamby, sokajy -63 kg vehivavy. Hany tokana voasokajy hiatrika ny Lalao Olympika 2016 (J.O), mizotra amin’izao fotoana izao, any Rio, Brezila.
Hiatrika ny famaranana avy hatrany eo amin’io sokajin-danja misy azy io ity solontenantsika tokana ity, anio. Atleta 15 hatramin-dRavololoniaina Elisa Vania indray hiady volamena amin’izany. Tsy ho mora, araka izany, ny miandry ity atleta malagasy miaro ny voninahi-pirenena ity. Raha ny filaharana amin’ny fandaharam-potoana mantsy, ilay Kôlômbianina, Mercedes Perez no lohany arahin’ilay Sinoa, Wei Deng, sy ilay Tailandezy, Rattikan Gulnoi, eo amin’ny faharoa sy fahatelo. Any amin’ny laharana faha-15 farany amin’ny filaharan’ireo mpifaninana mantsy ny misy an’i Vania. Na izany aza, vonona ny hiady mafy ary hanome izay fara heriny sy fahaizany ity solontenantsika ity.
Marihina fa atleta dimy sisa miatrika ny Lalao Olympika 2016 any Rio. Efa nihintsana ary nangoron-damba teo amin’ny dingana voalohany teo amin’ny taranja judo ilay solontenantsika tokana teo amin’ny sokajy -48 kg vehivavy, Ratiarson Asaramanitra.
Ankoatra izay, raha ny filaharana ankapobeny amin’ny fahazoana medaly taorian’ny andro fahefatra indray, mitana ny lohany i Etazonia, nahazo medaly 12 ka volamenany telo, dimy volafotsy ary efatra alimo. Manaraka azy eo amin’ny laharana faharoa i Sina, nahazo medaly valo ka volamena ny telo, roa volafotsy ary telo alimo. Fahatelo i Aostralia, nahazo medaly enina ka ny 3 volamena, telo alimo.